खुसीको खबर : अब नि’षेधाज्ञा खुल्ने भयो , कहिले देखी ? सबैले हेर्नुहोला । – Taja Khawar
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १९, २०७८ समय: १५:४९:०३
त्यस्तै जेठ १० गते ३६.३० प्रतिशत मानिसमा संक्रमण देखिँदा हिजो शनिबारसम्म आइपुग्दा सं’क्रमण दर ३०.४१ प्रतिशतमा झरेको हो। जेठ ९ गतेअघि संक्रमण दर ४० प्रतिशतभन्दा बढी थियो।
विज्ञहरूले सं’क्रमण दर घटिरहेकाले लकडाउनलाई विस्तारै खुकुलो पार्दै लैजान सकिने सुझाएका छन्। भा’इ’रोलोजिष्ट तथा इ’पिडियोमोलोजी तथा रो’ग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे भन्छन्, ‘संक्रमण घट्दै गए पनि नि’षे’धाज्ञालाई जेठभरि चाहिँ खोल्नु हुँदैन। असारदेखि भने बिस्तारै खुकुलो पार्दै लान सकिन्छ।
उनले सं’क्रमण दर बिस्तारै घट्दै गएकाले अन्य आवश्यक कदम कार्यान्वयन गरी नि’षेधाज्ञालाई बिस्तारै खुकुलो पार्न सकिने बताए। भा’इरोलोजिष्ट पाण्डेका अनुसार नि’षेधाज्ञाले सं’क्रमणको ‘चे’न ब्रेक’ गराउन ठूलो मद्दत पुग्ने भए पनि त्यसका लागि अन्य विधि पनि रहेको जनाए।
‘लकडाउन गर्ने भनेकै सं’क्रमणको ‘चे”न ब्रेक’ गर्ने हो तर त्यसका लागि अरू पनि उपाय छन्। जस्तै खोपलाई जोड दिनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘लकडाउन मात्र गरिरहने हो भने मानिस भोकले मर्छन्। अस्ति एकजना मान्छेले मसँग चिउरा खानलाई भन्दै रुँदै बीस रुपैयाँ माग्नुभयो। त्यसैले योबारे पनि सोच्नुपर्छ।’
उनले पछिल्लो समय संक्रमण दर घ’ट्दै गएकाले पनि यसलाई नियन्त्रण गरेर लकडाउन खु’कुलो पार्दै लान सकिने जनाए। तर लकडाउन खुकुलो पारे पनि अस्पतालहरूलाई त्यो बेलासम्म सशक्त बनाएर राख्नुपर्ने उनी बताउँछन्। किनभने सं’क्र’मण घटे पनि तत्काल मृ’त्यु’दर नघट्ने भएकाले अहिले सं’क्रमण देखिएका व्यक्तिलाई दुई सातासम्म पनि सिकिस्त बनाउन सक्ने पाण्डेले बताए।
कतिपयले भने परीक्षण नै कम भएकाले पनि सं’क्र’मणमा कमी देखिएको तर्क गरेका छन्। कम परीक्षण भए पनि सं’क्र’मण दर पनि कम हुँदै गएकाले सं’क्रमण घटेकै मान्नु पर्ने पाण्डे बताउँछन्।
‘परीक्षण कम भएको छ तर सं’क्रमण दर पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ। जस्तै सय जनाको परीक्षण गर्दा कति जनामा पोजेटिभ देखियो भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा सं’क्र’मण घटेकै भनेर मान्नुपर्छ,’ उनले भने।
नेपालमा सं’क्र’मण घट्नुका एउटा कारण भारतमा पनि बिस्तारै सं’क्र’मण घट्दै जानु भएको उनी बताउँछन्। पाण्डे भन्छन्, ‘भारतमा पनि के’स घटिरहेकाले नेपालमा पनि सं’क्रमण स्वत: कम भएको हो। अघिल्लो लहरमा पनि त्यस्तै नै भएको थियो।
एक महिनादेखि जारी गरिएको लकडाउनले पनि सं’क्रम’णको ‘चेन ब्रेक’ गराउन ठूलो मद्दत पुगेको उनी बताउँछन्। लकडाउनका कारण मानिसहरूको आवतजावत कम भएको भन्दै यसले सं’क्र’मण धेरै फैलिन नपाएको उनको बुझाइ छ।
सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन पनि अहिले सं’क्र’मणको दर जसरी घटिरहेको छ अब सं’क्र’मण योभन्दा बढ्ने नदेखिएको बताउँछन्।
‘जसरी सं’क्र’मण दर घटिरहेको छ यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ। यसले हामी राम्रो अवस्थातिर गइरहेको भन्ने पनि संकेत गर्छ। अब सं’क्र’मण योभन्दा बढ्ने वाला छैन,’ उनले भने। अनलाइन स्टार टिभि बाट
Last Updated on: June 2nd, 2021 at 3:49 pm